तपाईलाई थाहा छ कस्ता रोग लागेका व्यक्तिले म.म. खाएमा ख,तरा हुन्छ ? -
तपाईलाई थाहा छ कस्ता रोग लागेका व्यक्तिले म.म. खाएमा ख,तरा हुन्छ ?
लोकप्रिय ममको माग आजको बजारमा अत्याधिक मात्रामा रहेको छ । मानिसहरू स्टीम र फ्राई मम स्वाद मानी मानी खाने गर्छन् अझै भन्ने हो भने त नयाँ पिढी ले । तर स्वास्थ्यको हिसाबले मम गतिलो कुरा हैन किनकि यसले रक्तचापको समस्या बढाउँछ । रक्तचापको परीक्षण १२०/८० एमएमएचजीका आधारमा गरिन्छ । यहाँ १२० अंक सिस्टोलिक रक्तचाप हो र यसलाई सामान्य भाषामा हाई प्रेसर भनिन्छ । अनि तलको रक्तचापलाई डाइस्टोलिक भनिन्छ अर्थात् लो प्रेसर ।
उच्च रक्तचाप आफैंमा एक रोग हो अनि यसले शरीरका अन्य अंगलाई पनि नराम्रो प्रभाव पार्छ । मुटु, कलेजो र मिर्गौलालाई यसले घात गर्छ। आँखालाई पनि यसले हानि गर्छ । उच्च रक्तचापका कारण दिमागका नसाहरू फाट्ने हुनाले मानिसको ज्यानै पनि जान सक्छ। रक्तचाप सन्तुलनमा राख्नका लागि मम लगायतका खानेकुरा कहिलेकाहीँ मात्र खाने गर्नुपर्छ । नियमित रूपमा रक्तचापको परीक्षण गर्नुपर्छ ।
चिकित्सकहरूका अनुसार, अत्यधिक मात्रामा फास्टफूड खाँदा युवामा उच्च रक्तचापको समस्या निकै बढिरहेको देखिऐेको छ । तनावपूर्ण जीवनशैली, अनियमित खानपान, फल र मम जस्ता फास्टफूडको सेवन, चिल्लो र निष्क्रिय जीवनशैलीका कारण रक्तचापको समस्या बढिरहेको छ । लसुन खाएमा रक्तचापको समस्या निदान हुन्छ किनकि यसले रगत जम्नै दिँदैन र कोलेस्ट्रोलाई नियन्त्रण गर्छ । साथै एक ठूलो चम्चामा अमलाको रस र मह बराबर मिसाएर बिहान बेलुका पिउँदा उक्त रक्तचापमा राहत पुग्छ ।
प्रकाशित भएको : February 15th, 2020